Maalmihii hore ee wanaagsanaa ee la socday "Térébinthes de la caddaaladda"; Thanks to "Téréyaya Compilations", waxaan leenahay mudnaan aan ku kalsoonaano maalmahaa qurxanaa ee quruxda badnaa markii muusikada Afrika ay si dhab ah uga soo muuqatay calankeeda ... (VIDEO)
Posted By: KongoLisolowaa: Oktoobar 4, 2020 00: 10 No Comments
Muusiga Afrikaanka ah wuxuu lahaa dabeecaddiisa asalka ah: "Afrikaanimada". Sida garaaca wadnaha oo kale, qaafiyaddu waxay ahayd mid siman, saafi ah oo jilicsan. Tallaabooyinka qoob-ka-ciyaarka ayaa kiciyay qiiro iyo yaab. Dharku wuxuu ahaa mid aan fiicnayn, sharaf leh, hufan oo ixtiraam u leh anshaxa, dhaqanka iyo qiyamka dhaqameed ee Afrika.
Xaraashka, qurxinta qashinka, sawaxanka, buuqa iyo moodada aan muuqan meelna kuma lahan. Fanaaniinta taxaddar la'aanta ah, heesaayaasha iyo qoob-ka-ciyaarka xaq uma lahayn cutubka. Sidee ayey u qurux badneyd waqtigan quruxda badan ee Afrika halkaasoo (DRC) ay ka soo dhalaashay dhalaalkeeda farshaxanimo.
roobab aad u culus
HI / LO: 17/4 ℃